Emaphandleni kunye neendawo zomlilo, i-terrace kunye negadi ! - I-Airbnb
Emaphandleni kunye neendawo zomlilo, i-terrace kunye negadi !
Ifama sinombuki zindwendwe onguMathilde
Abathandi bendalo: Ukutshintsha indawo eqinisekisiweyo !
Indlu esemaphandleni enamagumbi aliqela nenomtsalane, ekwimizuzu nje eyi-15 ukusuka embindini wedolophu. Inika indawo epholileyo nefudumeleyo elungele abantu abathanda indalo.
Izinto ezininzi ezenziwayo ziyafumaneka kulo mmandla
ngexesha lasehlotyeni: iinkolelo, ukunyuka intaba, ukuloba, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngebhayisekile, ukunyuka intaba, ipuli yokuqubha, umqolomba kunye nokundwendwela inqaba...
" Siyathemba ukuba le ndawo incinci enamadonga amatye iza kukunika ubumnandi obukhethekileyo ngokukunika ikhefu elingaphelelwa lixesha kwindawo ethe cwaka nepholileyo."
-> Ngenxa yengxaki yempilo, izinto zokondlula ibhedi (amashiti, izinto zokogquma...) kunye neetawuli azisafumaneki, enkosi ngokuqonda kwakho.
-> Izilwanyana zasekhaya : "Izilwanyana zasekhaya ezincinci" zisenokwamkelwa. Nangona kunjalo, nceda usazise ngomyalezo ngaphambi kokubhukisha,
-> Kusenokubakho iibhedi ezongezelelekileyo (ukuba kuyimfuneko ukongeza iibhedi endlwini kunye/okanye ukukhempisha ngaphandle (igadi enkulu yabucala). Ngale mimiselo, nceda uqhagamshelane nathi ngomyalezo kwaye siza kubeka imali eyongezelelweyo yosuku. Siza kulungiselela ukuba kuyimfuneko)
Yiza uze uhlaziye iibhetri zakho kwigadi yethu enomtsalane kunye negadi yabucala!
Ulahlwayo, indawo yokuhlala ezimeleyo (indawo yokungena yabucala) :
* Ikhitshi : lixhotyiswe ngokupheleleyo, itafile, ifriji, i-deep freezer, ioveni, isitovu, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokwenza ikofu, i-senseo, iketile, i-toaster, i-microwave, ukupheka nge-steam, njl.
-> Iimveliso ezibalulekileyo ziyafumaneka (ioyile, ityuwa, ipepile, iviniga, iimveliso zokuhlamba izitya kunye nomgangatho, iphepha langasese) kunye nemifuno yegadi yemifuno ixhomekeke kuwe.
* Igumbi lokulala 1 : igumbi lokulala elikhulu, ibhedi elala abantu ababini enedesika + nekhabhathi (negumbi lokuhlambela) + ikhothi
* Igumbi lokulala 2 : ibhedi engentla kwenye enebhedi elala abantu ababini nebhedi enye
* Igumbi lokutyela: itafile enkulu, isitovu seenkuni, isitulo sokutyisela usana, imidlalo yebhodi
* Igumbi lokuhlambela eline-shower kunye nendlu yangasese esecaleni.
* Igumbi lokuhlala: i-TV, i-DVD player, isofa, izitulo, indawo yomlilo enkulu eyi-1.
* Iselfowuni: umatshini wokuhlamba impahla, ishelfu yokugcina izinto, umatshini wokutshayela, indawo yokuxhoma iimpahla
* Ngaphandle: igadi yabucala enetafile yeplanga, iambrela, iibhedi zelanga, indawo yokoja inyama, inqugwala labantwana bethu elifumanekayo ukuze wonwabele izinto zakho ezincinci ezinemidlalo yangaphandle ekhoyo ngaphakathi.
-> Ukwenza indlu ibe shushu + iindawo zokubasa umlilo, mhlawumbi ungathenga iinkuni kwisayithi
(10€/ikalika esetyenzisiweyo, unokuphinda ugcwalise ikalika ngeplanga ngaphandle, egadini). Sithembele ekuthembaneni kweendwendwe, imbiza elungiselelwe ngokukhethekileyo ikwigumbi lokutyela.
Izindlu ezilungiswe ngokupheleleyo ngu-Papa Guy, siyakuvuyela ukudibana nabantu abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo. Ubuhlobo kunye neemvakalelo ezintle ziza kuba kwi-rendezvous, wamkelekile kwifama yolonwabo!
Kuyo yonke le ndlu ungazazi izilwanyana zasefama.
* Ukucoca kufuneka kwenziwe ngaphambi kokushiya indawo yokuhlala ! Kodwa ke, ukuba inxalenye yekhaya ayithotyelwanga, siza kufumana inxalenye yediphozithi.
Yonke into oyifunayo ikwindawo yokugcina izinto emnyango wendawo yokuhlala. Izinto ezibalulekileyo ongazilibali: izitya ezihlanjiweyo neziqoqoshiweyo, umatshini wokuhlamba izitya ongenanto, ioveni neefriji ezicociweyo, umatshini wokutshayela nemophu edlulileyo kunye nenye inkcazelo ekwincwadi yokwamkela iindwendwe efumanekayo kwindawo yokuhlala. Sinqwenela ukubuyisela indawo yethu yokuhlala kwimeko yayo yokuqala.
* Ukuhlala ngaphandle kokucoca kunokwenzeka ! Ukhetho lwekhaya = € 48!
(Ungoyiki ukusazisa, ungenza isigqibo ngale ndlela xa unikezela ngezitshixo, ubhatale ngemali kuphela)
4.78 · Izimvo eziyi-156
360° indalo !! Phakathi emaphandleni, akukho bamelwane. Ukuzola nokuzola ngokugqibeleleyo kukulindele! Inendawo entle yokubona iSaint-Girons kunye neendawo ezijikelezileyo.
Indawo yethu epholileyo isekwindawo ekufutshane neevenkile ezinkulu kunye nazo zonke iivenkile kunye neenkonzo. (malunga nemizuzu eyi-15 ukusuka kwidolophu iSaint-Girons ukuya kwindlu esemaphandleni)
Yiza utyibilike emkhenkceni phakathi kwePyrenees, indawo efanelekileyo yokuhlala ekwimizuzu eyi-50 ukusuka kwiGuzet Ski Resort
Umbuki zindwendwe ngu- Mathilde
Ukuba unazo naziphi na ezinye iimfuno, nceda ungoyiki ukubuza !
Siza kukunceda ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho kunye namacebiso ethu okukunceda ubone ingingqi yethu kunye neendawo ezikujikelezileyo.
Sikhona ukuze sikuncede.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Girons